Kasị mmetọ mba n'ụwa: àgwà na pụta | Green Renewables
Portillo nke German | 17/05/2022 12:00 | Gburugburu
Mmetọ zuru ụwa ọnụ bụ ezigbo nsogbu dị oke mkpa nke ekwesịrị ilebara ya n'ụzọ bụ isi. Mgbe anyị na-ekwu maka mmetọ nke mba abụọ ahụ na-emepụta, anyị na-ekwukarị maka mmetọ ikuku. Ọ bụ ezie na e nwere ụdị mmetọ dị iche iche, mmetọ ikuku na-akpata ajọ ihe n'ụwa nile, dị ka okpomọkụ zuru ụwa ọnụ na mgbanwe ihu igwe. Nke ọtụtụ mba na-emetọ ụwa Ha bụ ndị na-ebunye ikuku ndị kacha emetọ ikuku n'ikuku.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị nke bụ mba ndị na-emerụ emerụ na ihe ndị na-akpata mmetọ ikuku na gburugburu ebe obibi.
1 Mmetọ ikuku
2 Isi na ya pụta
3 Obodo kacha emetọọ n'ụwa
4 Ọtụtụ mba ndị rụrụ arụ n'ụwa
Nke a bụ okwu na-abụghịzi naanị maka ọdịmma gburugburu ebe obibi. Ọ bụrụla akụkụ nke ndụ onye ọ bụla kwa ụbọchị kemgbe ọtụtụ afọ. Mmetọ ikuku bụ nchegbu zuru ebe niile, na ngwọta ya adịghị n'aka gọọmenti ma ọ bụ mba dị iche iche, ma onye ọ bụla nwere ike inye otu mkpụrụ nke ájá iji kwụsị ihe ndị a. Ihe àmà kachasị anya nke mmetọ ikuku bụ ígwé ojii a ma ama nke mmetọ nke na-agbakọta gburugburu obodo mepere emepe ma na-emerụ ahụ ike.
Enwere ụdị mmetọ ikuku ndị ọzọ nke a na-adịghị achọpụta ngwa ngwa ma ọ bụ hụ anya, ma na-enwekwa nsonaazụ na-egbu egbu maka ahụike nke ihe ndị dị ndụ na gburugburu ebe obibi. Ihe mmetọ ndị a na-ebute okpomoku na oke ọdachi nye ụwa. Na nchọpụta anyị chọpụtara ihe kpatara mmetọ ikuku, anyị na-ahụ na kemgbe ọtụtụ puku afọ nke ndụ na mbara ala a, emepụtala ihe ndị na-egbu egbu.
Mgbapụta nsi bụ akụkụ nke usoro ndụ, mana n'ime oke okike. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, mmetọ n'ụzọ nkịtị anaghị emetụta ihe mejupụtara ma ọ bụ nhazi nke gburugburu ebe obibi n'ihi na ọ na-apụta ozugbo. Ọ bụ akụkụ nke okirikiri ma ọ naghị abawanye n'ihi ọrụ mmadụ. N'ime ihe ndị a na-ekupụ, anyị na-ahụ ikuku ndị na-ekupụ n'oge mgbawa ugwu, ma mmetụta ha adịghị adịgide adịgide. Otú ọ dị, na ọbịbịa nke Human Industrial Revolution na ụbara ọnụ ọgụgụ mmadụ na-esiwanye ike, anyị na-eche ihu ala zuru ụwa ọnụ nke mmetọ ikuku ihu.
Mmetọ ikuku ọ bụla na-ezo aka na ọnụnọ nke ihe na-egbu egbu nke ọrụ mmadụ na-emepụta.
Isi na ya pụta
Dị ka anyị niile maara, ihe na-esi na mmetọ ikuku pụta dị ọtụtụ. Nke mbụ na nke kachasị ngwa ngwa bụ mmụba na njọ nke ọrịa iku ume na ọrịa obi n'etiti ndị mmadụ bi n'ime ime obodo mepere emepe. Ndị ọzọ, nso ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ha na-ahapụ ngwaahịa ndị a na-egbu egbu n'ime ikuku. Ọrịa iku ume na ọrịa obi abawanyela nke ukwuu na mpaghara ndị a niile.
A na-eme atụmatụ na Ihe dị ka 3% nke ụlọ ọgwụ na-akpata site na mmụba nke ọrịa ndị metụtara ya na oke mmetọ na ikuku. Mba ndị kachasị emetọọ n'ụwa bụ ndị nwere oke ikuku gas ndị a na ya mere mmetụta kachasị na ahụike.
Mmetụta ọzọ dị njọ nke mmetọ ikuku bụ mmetụta griin ha maara nke ọma. Anyị ekwesịghị mgbagwoju anya na griin haus mmetụta onwe ya na-abawanye. Nsogbu abụghị na enwere mmetụta griin haus (na-enweghị ya, ndụ agaghị adị ka anyị si mara ya), ọ bụ na ọ na-abawanye mmetụta nke gas ndị a. Ụfọdụ nsogbu nke mmetọ ikuku na-ebute bụ mbibi nke gburugburu ebe obibi, nnukwu ọrụ, oke oke osimiri, mpụ nke ala, mmepụta ụmụ ahụhụ, mkpochapụ nke ụdị., Wdg
Obodo kacha emetọọ n'ụwa
Anyị maara na kwa afọ ihe karịrị ijeri tọn 36 nke carbon dioxide na-esi n'ikuku pụta. Ọ bụ isi ikuku griin haus na-akpata mgbanwe ihu igwe. Ụzọ e si apụta mmanụ ụgbọala a bụ n'ihi na-emetọ ihe ndị mmadụ na-eme. Ka o sina dị, naanị ole na ole n'ime mba ndị kacha emetọ n'ụwa na-ebunye ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ikuku ndị a. O doro anya na mba kachasị emetọ n'ụwa n'afọ ndị na-adịbeghị anya bụ China, United States, India, Russia na Japan.
Mgbe anyị na-ekwu maka ikuku CO2, anyị na-akpọ ya gas bụ isi, mana a na-akpọkwa ya metrik. Mgbe anyị maralarị ihe ikuku CO2 dakọtara, anyị nwere ike marala akara akara carbon nke steeti ọ bụla, ọ bụ ezie na ezi uche dị na ya. mmetọ ọ na-emepụta abụghị ihe niile, ma ọ bụ CO2.
Ọ bụrụ na anyị amaghị, anyị kwesịrị ịma na ọkwa mmetọ ugbu a emeghị n'ime opekata mpe afọ 3 na-enweghị ụmụ mmadụ n'ụwa. E kwesịkwara icheta na n'oge ahụ Ụwa nọ na-agafe n'oge mgbawa ọkụ na-arụsi ọrụ ike.
Dị ka data dị, anyị na-ahụ na China na-akpata 30% nke mkpokọta ikuku ikuku zuru ụwa ọnụ, ebe United States na-aza 14%. Ka anyị tụlee ihe bụ ọkwa mba ndị kacha emetọọ n'ụwa:
China, nwere ihe karịrị nde tọn 10.065 nke ikuku carbon dioxide
India, nwere 2.654 GtCO2 nke ihe anapụta
Russia, nwere nde tọn 1.711 nke ikuku CO2
Germany, tọn 759 nde CO2
Iran, 720 nde tọn nke CO2
South Korea, 659 nde tọn CO2
Ọtụtụ mba ndị rụrụ arụ n'ụwa
Bangladesh batara n'ọkwa nke mba ndị kachasị emetọọ n'ụwa maka oke mmetọ ya. Ogo ikuku ya dị obere n'ihe metụtara ọkwa ekwenyere. Nkezi nke irighiri ihe na-emetọ ihe ruru 97,10. Ego a bụ n'ihi akụkụ ya ihe karịrị nde mmadụ 166 bi na Bangladesh bụ ndị na-akpata oke ikuku ikuku. Ọ bụ n'afọ ndị na-adịbeghị anya ka ngalaba mmepụta ihe nke mba ahụ toro nke ukwuu. Enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ, ọkachasị ụlọ ọrụ akwa, na-emepụta nnukwu ikuku gas na-ekpo ọkụ.
Isi mmalite akụ na ụba Saudi Arabia bụ mmịpụta mmanụ. Nke a bụ nnukwu isi iyi nke ego ma bụrụ otu n'ime nsogbu ha kacha njọ. Ọ bụ mwepu nke mmanụ na-abụghị nanị na-arụpụta uru akụ na ụba, ma na-ebutekwa nnukwu gas na-emerụ emerụ. mmanụ ọkụ fosil Ha na-egbu egbu ma na-emerụ ahụ ike.
India abanyekwala n'ọkwa nke mba kacha emetọ n'ụwa nwere nnukwu ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Ọ bụghị naanị na ọ na-eto eto na ụlọ ọrụ, ma ọ na-ejikwa fatịlaịza kemịkal eme ihe n'ụzọ na-ezighị ezi. Ojiji fatịlaịza a na-ezighi ezi emetọọla ala niile na-eme nri na aquifers na-echekwa mmiri.
Enwere ike ịsị na China bụ otu n'ime mba ndị na-ebute ụzọ na akụ na ụba ụwa. Agbanyeghị, ọ sokwa na mba ndị kacha emetọọ n'ụwa. Ọ bụ ya webatara mmata ọhụrụ na atumatu arụ ọrụ maka usoro iji gbochie na ịchịkwa mmetọ gburugburu ebe obibi. Ka o sina dị, nnukwu obodo nwere oyi akwa nke mmetọ ikuku nke na ị gaghị ahụ anyanwụ. Mgbapụta carbon dioxide nke China na-aga n'ihu na-amụba nke mba ndị ọzọ bụ isi dị ka United States okpukpu abụọ.
Mgbe ị na-eche maka obodo kacha emetọ emetọ n'ụwa, ikekwe ị naghị eche maka obodo a. Ya mere, dị ka na mba ndị ọzọ dị ka India na Saudi Arabia, mmepụta nke nnukwu mmalite na-amụba ngwa ngwa. Mmepe nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-eduga n'ikuku ikuku gabiga ókè. Egypt nwere ike rutela ọkwa mmetọ, ngụkọta nke okpukpu iri abụọ karịa ka ekwenyere.
Brazil bụ otu n'ime mba ndị na-emepe emepe nwere akụ na ụba bara ụba. N'ụzọ dị mwute, a na-ejikọta mmepe akụ na ụba a na mmata dị ala nke ilekọta gburugburu ebe obibi. Nke a dị ala nke itinye uche pụtara na enwekwara obere ihe gọọmentị na-eme. Ihe a niile na-agbakwụnye oke mgbukpọ nke otu n'ime akpa ume nke mbara ala, Amazon, tara ahụhụ. Ọ bụghị naanị na ọ na-abawanye ụba gas na-emerụ emerụ, kamakwa ọ na-ebelata nnabata nke carbon dioxide site na osisi.
Enwere m olile anya na site na ozi a, ị ga-amụtakwu banyere mba ndị kachasị emetọ n'ụwa na ndị kacha emetọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Gburugburu » Ọtụtụ mba na-emetọ ụwa